Education News | Page2| The Ladies
အမေရိကန်တက္ကသိုလ် University of Massachusetts Boston တွင် MBA – MS (Dual Master) ပူးတွဲရယူပြီး အလုပ်သင်ဝန်ထမ်း နေထိုင်ခွင့် ၃၆ လ လျောက်ထားနိုင် !!!
Read more about အမေရိကန်တက္ကသိုလ် University of Massachusetts Boston တွင် MBA – MS (Dual Master) ပူးတွဲရယူပြီး အလုပ်သင်ဝန်ထမ်း နေထိုင်ခွင့် ၃၆ လ လျောက်ထားနိုင် !!!
James Cook University Singapore ၏ Master of Information Technology မဟာဘွဲ့ (၁)နှစ်သင်တန်း ဖေဖော်ဝါရီ ကျောင်းဖွင့်ချိန် အတွက် စတင်လျှောက်ထားနိုင်ပြီ
Read more about James Cook University Singapore ၏ Master of Information Technology မဟာဘွဲ့ (၁)နှစ်သင်တန်း ဖေဖော်ဝါရီ ကျောင်းဖွင့်ချိန် အတွက် စတင်လျှောက်ထားနိုင်ပြီ
အခြေခံ နိုင်ငံခြားဘာသာ သင်တန်းများ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် လျှောက်ထားနိုင်
Read more about အခြေခံ နိုင်ငံခြားဘာသာ သင်တန်းများ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် လျှောက်ထားနိုင်
မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့်အာကာသပညာ တက္ကသိုလ်မှာ လက်ခံ ကျောင်းသားဦးရေတိုးမြှင့်
Read more about မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့်အာကာသပညာ တက္ကသိုလ်မှာ လက်ခံ ကျောင်းသားဦးရေတိုးမြှင့်
နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်တွင် ဟင်ဒီဘာသာစကားသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်မည်
Read more about နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်တွင် ဟင်ဒီဘာသာစကားသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်မည်
Read more about အများနှင့်မတူ ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်သော ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာများကို မွေးထုတ်ပေးနေသည့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်မှ Fashion and Textile Design ဘွဲ့ဒီဂရီ စင်ကာပူနိုင်ငံ MDIS တွင် တက်ရောက်နိုင်
HND Level5Diploma ပြီးဆုံးထားသူများအတွက် သြစတြေးလျ နိုင်ငံ Central Queensland University ၏ ကျောင်းဝင်ခွင့်နှင့် ဘာသာရပ် ကင်းလွတ်ခွင့်များအကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲ AT&S တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ပေးမည်
Read more about HND Level5Diploma ပြီးဆုံးထားသူများအတွက် သြစတြေးလျ နိုင်ငံ Central Queensland University ၏ ကျောင်းဝင်ခွင့်နှင့် ဘာသာရပ် ကင်းလွတ်ခွင့်များအကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲ AT&S တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ပေးမည်
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများရှိ ရေနံတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းခွင်များတွင် လစာမြင့်မြင့် မားမားဖြင့် အလုပ်ဝင်နိုင်မည့် Curtin University ၏ Petroleum Engineer ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ AT&S တွင် ကျင်းပပြုလုပ် မည်
Read more about ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများရှိ ရေနံတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းခွင်များတွင် လစာမြင့်မြင့် မားမားဖြင့် အလုပ်ဝင်နိုင်မည့် Curtin University ၏ Petroleum Engineer ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ AT&S တွင် ကျင်းပပြုလုပ် မည်
အင်္ဂလန်တက္ကသိုလ်များသို့ ဘွဲ့လွန်တန်း တက်ရောက်လိုသူများ အတွက် အသေးစိတ် မေးမြန်စုံစမ်းနိုင်
Read more about အင်္ဂလန်တက္ကသိုလ်များသို့ ဘွဲ့လွန်တန်း တက်ရောက်လိုသူများ အတွက် အသေးစိတ် မေးမြန်စုံစမ်းနိုင်
စာပေဖန်တီးရေးသားမှုနှင့် တည်းဖြတ်မှုအတတ်ပညာ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ သင်တန်း အပတ်စဉ် ၄ ကို ဒီဇင်ဘာလတွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ ဖွင့်လှစ်မည်
Read more about စာပေဖန်တီးရေးသားမှုနှင့် တည်းဖြတ်မှုအတတ်ပညာ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ သင်တန်း အပတ်စဉ် ၄ ကို ဒီဇင်ဘာလတွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ ဖွင့်လှစ်မည်